Shaqooyinka Ganacsiga - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Shaqooyinka Ganacsiga
Waaxda Ganacsigu waa hormuudka ganacsi ee si weyn loo aqoonsan yahay ee ka jira dawladda gobolka waana hoggaamiye la ixtiraamo oo shuraako la ah qaybaha gaarka loo leeyahay si loo kobciyo dhaqaalaha gobolkeenna si ay uga faa'iidaystaan ​​dhammaan dadka deggan. Fiiri annaga Buugga Kheyraadka Hay'adda si aan wax badan uga barto barnaamijyadeenna oo aan u shaqeyno.
Furitaanka hadda ee Ganacsiga
Waaxda Ganacsiga waa loo shaqeeye fursad loo siman yahay mana takoorto iyadoo lagu saleynayo da'da, jinsiga, xaaladda guurka, jihada galmada, jinsiyadda, caqiidada, midabka, dhalashada waddanka, si sharaf leh looga eryay halyeey ama xaalad militari, ama joogitaanka wax dareen ah, naafonimo maskaxeed, ama jir ahaaneed ama adeegsiga xayawaan adeeg leh oo loo tababaray qof naafo ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka la shaqeynta Ganacsiga iyo shaqaale ahaan Gobolka Washington:
Gargaarka caafimaadka & ilkaha
11 maalmaha fasaxa ah
Fasax madani ah
Magdhow dib loo dhigay
Bixi mushahar la'aan
Fasaxa fasaxa (Fasax Sanadeed)
Magdhowga Shaqo La'aanta
Kaalmada daryeelka ku tiirsan
Fasax wadaag ah
Adeegga latalinta shaqaalaha
Barnaamijka kaalmada waxbarashada
Soo koobid ka mid ah faa'iidooyinkan shaqo ee gobolka, booqo Websaydhka Kheyraadka Shaqaalaha ee Gobolka Washington.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan la shaqeynta Waaxda Ganacsiga, fadlan kala xiriir Xafiiska Kheyraadka Aadanaha lambarkan 360-725-2650. Haddii aad u baahan tahay in lagu dejiyo inta lagu guda jiro hawsha dalabka ama aad u baahan tahay ogeysiiskan oo qaab kale ah, wac 1-800-833-6384 ama TDD / TTY 1-800-833-6388.
Fadlan booqo www.careers.wa.gov wixii macluumaad dheeraad ah.